DEG DEG:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo ka dhoofay garoonka Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo ka dhoofay garoonka Muqdisho
Wafdi uu horkacaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa goordhow ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda magaalada Cammaan ee dalka Urdun.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalinta berri ah magaalada Cammaan ee caasimadda dalka Urdun kaga qeyb-galo shir madaxeedka Jaamacadda Carab oo halkaasi ka furmaya iyo casuumaad gaar ah uu ka helay boqorka dalkaasi.
Waa safarkii seddaxaad oo madaxweyne Farmaajo uu dalka dibadiisa uga amba-baxo muddo 40 cisho gudahood ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8-da bisha Febraayo ee sanadkaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa koowaad iyo labaad tan iyo markii la doortay ku kala tagay dalalka Sacuudiga iyo Kenya, kadib markii uu casuumaad kala duwan ka helay boqorka Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay uu madaxweyne Farmaajo kasoo dhex muuqdo shir ay yeeshaan madaxda dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta, waxaana arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi maalinta berri looga hadli doonno ka mid ah dhibaatooyinka ka taagan dalalka Carabta oo ay dalka Soomaaliya ka mid tahay.